Ogeysiis Muhiim ah oo ku socda reer Minnesota kuna saabsan Fatahaadii Webiga Shabeele ee Baladwayne.[Sawiro]
Minneapolis: Waxaa ku dhintay 6 qofood, waxaana ku barakacay qiyaastii in ka badan 3500 oo qoys, ka dib markii roobab xoogan ka da’een gobolka Hiiraan, kaasoo sababay fatahaada wabiga shabelle, wiigii hore dhamaadkiisii. Meelaha ugu daran waa Baledwayne iyo nawaaxigeeda waxaa laga cabsi qabaa in roobab kale da’aan, oo xaalada uga sii darnaato, sida ay sheegtay, FAO/SWALIM.
Daadadku waxay Dhibaato xooggan u gaysteen dadkii ku dhaqnaa Gobolka Hiiraan. Sidda ay warisay Qarammada Midoobay, 21,000 oo qof ayaa fatahaada Shabelle ku qasabtay inay guryahooda ka qaxaan. Boqolaal kun oo kalena waxay ku jiraan khatar. Tiro aan la cayim oo Guryo, Buulal, Suuqyo iyo Ceelal ayaa burburay. Qarammada midoobay waxay warisay khasaaraha inuu ka midyahay, Lix dhimasho ah iyo tiro aan cayimin oo dhaawac ah.
Iyagoo ka jawaabaya ARC iyo HARO ee jooga Soomaaliya, waxay gayn doonaan shaqaalahooda oo wada jira goobta dhibaatadu ka dhacday, si ay u soo sameeyaan qiimayn dag dag ah, sidoo kale qaar ka mid ah Ha’ayada Maaraynta Musiibooyinka ee Soomaaliya. Qiimaynta ka sokow, kooxdaa isku dhafan waxay u qaybin doonaan,qoysaska wax yeeloobay, waxyaabaha aan cunada ahayn, Non-food Items (NFI) waxaana ka mid ahaan kara alaabadaan, Maro Kaneeco, Baco, Saabuun iyo Caagadaha biyaha lagu shubto.
“Waxaan walaac ka qabaa hadaad qoysaskaas dhibaataysan loo gurman, inay halkaas ka dilaacaan xanuuno khatara, xaaladuna sii murugto” Sidaa waxaa yiri Hassan Jama (Hassan Dhoye) Masuulka Fulinta ee Ha’ayda Haro. Hay’adaHumanitarian African Organization (HARO) waxay rabtaa inay si dag dag ah u aruuriso $10,000 si ay u gayso goobtaas gar gaar, dag dag ah qoysaska dhibaataysan. Sidoo kalena inay fuliso qiimayn dag dag ah oo ku saabsan baahida banii aadnimo ee halkaa ka jirta.
Sidoo kale dhaqaalahaaga waxaad noosoo marin kartaa xawilaadii kuu fudud. Waxaana Akoon ku leenahay Amaana Minneapolis, Account number #5079905288 iyo Tawakal Minneapolis Account# E-TAWAKAL :HARO
Please donate generously; you can donate online by using Paypal, a very secure transaction website. Put the amount you wish to donate, your donation save lives.
Please donate generously, you can send your donation any Hawala easy for you, we have accounts with Amaana Minneapolis, Account number #5079905288 and Tawakal Minneapolis Account# E-tawakal: HARO.
Ogeysiis gaar ah oo ku socda reer Minnesota.
Maalinta Sabtida October 6, 2012 Saacada 4:00pm iyo Goobta shirarka ee Safaari, dadka ku casuman iyo faah faahin intaa dheer fadlan halkaan ka eeg. Sidoo kalena soo wac xafiiska HARO 612-315-5691″ Wixii Faahfaahin ah oo dhamaystiran halkaan ka eeg
Dadka Goobta ka hadlaya;
Warbixintan Waxaa soo diyaarisay HARO
— Hassan Jama
Relief Organization (HARO)
3355 Hiawatha Ave South. Ste 202 Minneapolis,
MN 55406Line: 612-315-5691
One comment on “Ogeysiis Muhiim ah oo ku socda reer Minnesota kuna saabsan Fatahaadii Webiga Shabeele ee Baladwayne.[Sawiro]”
Ahmednuur on October 5, 2012 at 9:44 pm said:
Ikhwaanii halaga qaybqaato caawinta dadkeena,walaalaheen ku waxyeeloobay fatahaada daadadka somalia waxay u baahanyihiin cunto,dhar,teendhooyin,daawo iyo dhamaan adeega bulshada